भविष्यमा Mums लागि सुझाव: जन्म दिन के अस्पताल लिन
समाचार र समाज, महिला मुद्दाहरू
एक सबै भन्दा अहम expectant आमा को लागि मुद्दाहरूको - जन्म दिन अस्पताल लैजान के। यो बहस, राय र सरासर झगडे मतभेद धेरै गराउँछ - हरेक महिला अलार्म सुटकेश को संग्रह को कुरा मा सबै भन्दा योग्य विशेषज्ञ महसुस किनभने। तर त्यहाँ दृश्य सबै विवादित अंक मा एक खुश माध्यम हो? भनेर हामी पत्ता लगाउन प्रयास के।
तपाईं जन्म दिन अस्पताल लिन सबै सङ्कलन अघि, तपाईं एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ। दुई हुन आवश्यक विशेषताहरु संग प्याकेजहरू। यो कारण - यी संस्थाहरू अभ्यास सबै रहिरहेको-मा आमा र बच्चा, र बच्चाहरु पछि र बच्चालाई के लिन जहाँ चिकित्सा कर्मियों गर्न व्याख्या गर्न छैन कुराहरू अलग प्याकेज राख्न लागि त्यसैले राम्रो। व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आमा दोस्रो प्याकेजमा तयार गरिनेछ।
त्यसैले, बच्चालाई लागि दाइजो शहर अस्पतालमा जन्म लिन के। धेरै मानिसहरू गल्ती बच्चालाई गरेको दराज को सम्पूर्ण चिकित्सा छाती, स्तन पंप र बोतल को एक सेट, आधा प्याकेज मा पैक र शीर्ष डायपर को पैक को एक जोडी बन्द खत्म। यस्तो प्रशस्त, सम्भवत आवश्यक छैन। डायपर वा बच्चा गरेको undershirt र sliders - पहिलो, लगभग सबै प्रसूति को राज्य-स्वामित्व सामान मा लगाउने। दोश्रो, आजको छोराछोरीको सेवाहरू डायपर र औषधीको प्रदान, र यसैले 100 टुक्रा लागि डायपर को एक अर्थव्यवस्था प्याक लिन आवश्यक छैन - तिनीहरूले यो मात्रा मा उपयोगी छैनन्। पहिलो केही दिनमा स्तन पहिलो आवश्यकता को कुरा छैन - स्तनपान विशेषज्ञहरु यस विषयमा श्रम मा कुनै पनि महिला मद्दत गर्नेछ। र के साँच्चै उपयोगी छ?
- discharged कुराहरू सेट गर्न सकिन्छ (तपाईं बच्चा टिप्न छौँ के)।
- डायपर को एक सानो प्याक।
- पोंछे आधारित क्रीम वा तेल गर्भवती, बच्चालाई हटाउन।
- डिस्पोजेबल डायपर को प्याकेजिङ्ग।
- पाउडर वा तेल डायपर दाना बाट।
- आवश्यकताअनुसार बच्चा रुप बदल्नु गर्न सक्षम हुन डायपर वा overalls एक जोडी।
यहाँ यो छ - आवश्यक न्यूनतम एउटा सूची। यो र निर्देशित हुनुपर्छ मा, वास्तव मा, एक चिम्टी मा, तपाईं सधैं नातेदार प्रसब पछि छुटेको ल्याउन अनुरोध गर्न सक्छ।
सबैभन्दा नयाँ आमा जन्म दिन के अस्पताल लिने? यहाँ, धेरै धेरै टाढा, तर त्यहाँ तपाईं कठिनाइ जो बिना कुराहरू एक अनिवार्य सूची छ:
- दुई सहज nightgowns ;
- bathrobe अलग जान;
- वर्ष को coolest समयमा न्यानो मोजा को हेरचाह गर्न सबै भन्दा राम्रो छ - प्रसब पछि धेरै चिसो छन्;
- विशेष उच्च absorbency सेनेटरी पट्टियां वा प्याक डिस्पोजेबल डायपर postpartum भ्रमणको लागि;
- डिस्पोजेबल underpants आफ्नो लुगा धोइदिनुभएर संग कुनै समस्या छ;
- स्वच्छता उत्पादनहरु - टूथब्रश र टूथपेस्ट, स्याम्पु, साबुन, तौलिया;
- यो स्नेहन निपल क्रीम लागि - कहिलेकाहीं यसलाई आवश्यक सुरु छ।
जन्म दिन अस्पताल लैजान के को न्यूनतम सूची - यो छ। यो संस्थाले फरक गर्न सक्नुहुन्छ। सिद्धान्त मा, पाङ्ग्रा reinvent छैन ताकि, पत्ता लगाउन सजिलो तरिका तपाईं आवश्यक छ कि यो के - आफ्नो संस्था को आपतकालीन विभाग सम्पर्क गर्नुहोस्। वितरण लिन के को सूचीकरण, शहर कुनै पनि मामला मा अस्पताल प्रदान गर्नेछ, र पनि एक सामान्य प्याकेजमा राख्न आवश्यक दबाइहरु को सूची दिन हुनेछ। संस्था आधारमा, यी सूचीहरू केही फरक हुनेछ - तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै आवश्यकताहरू छन्।
र हाम्रो अस्पताल कुराहरू सूची 2013 मा तपाईँले आवश्यक घरेलू वस्तुहरू systematize लागि सजिलो र स्पष्ट उपयोगी कुराको खरिदका लागि सेट अप।
विज्ञान: कसरी bitch बन्न
जो ब्रा आविष्कार? यस ब्रा को घटना को इतिहास। मोडेल र ब्रा को निर्माताहरु
छाती को प्रकारका: प्रकृति को प्रकारका देखि एक चिल्लो संक्रमण
Sharov Andrey: हत्या र छानबिन परिणाम
किन हेलो Nipples वृद्धि?
सुझाव souped आमाहरु: दूध हात कसरी व्यक्त गर्न
महिला ब्रान्ड मा प्रवृतिमा जैकेट र कोट को संग्रह
धेरै बोसो द्वारा प्रिय। लाभ र उत्पादन को हानि।
हड्डी को Avascular necrosis। को femoral टाउको को Avascular necrosis
बियर को घनत्व हो ... पानी र वजन को सम्बन्ध मा बियर को घनत्व
वयस्क र बच्चाहरु को लागि क्रिसमस दृष्य
हल्का इटालियन डेसर्ट
को पेट मा दुखाइ
स्नान फलाम र एक्रिलिक। स्थापना फलाम स्नान
मानव अधिकार आर्थिक र राजनीतिक छन्। सामाजिक-आर्थिक अधिकार र मानिस र नागरिक को स्वतन्त्रता
Togliatti होटल। सर्वश्रेष्ठ सम्झौताहरू